Mamolavola drafitra marketing marketing fizahan-tany amin'ny tontolo miova
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Mamolavola drafitra marketing marketing fizahan-tany amin'ny tontolo miova
Septambra 4, 2018
Izay mijery ny vaovao dia tsy afaka miala tsy ho mailo fa miova haingana izao tontolo izao, ary mbola miatrika fanamby ny fizahan-tany sy ny fitsangantsanganana.
Na iza na iza mijery ny vaovao vetivety aza dia tsy afaka mieritreritra fa miova haingana izao tontolo izao, ary ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahan-tany dia miatrika fanamby maro. Manomboka amin'ny fifandrafiana any Moyen Orient ka hatrany amin'ny vidin'ny solika miakatra sy midina, manomboka amin'ny tsunami amin'ny Azia ka hatrany amin'ny onjan'ny asan-jiolahy sy ny fakana ankeriny any Amerika Latina dia matetika ireo tompon'andraikitra misahana ny fizahantany no “takalon'aina amin'ny tranga ankehitriny.
Ny fizahan-tany, sy ny indostria mifandraika amin'ny dia sy ny fandraisam-bahiny, dia matetika miorina amin'ny volan'ny tsena, ny fanatsarana ny vokatra ary ny endrika hafa tsy an'ny mpanjifa. Satria lasa indostria mifaninana lalindalina kokoa ny fizahan-tany, ny mpitantana jeneraly sy ny mpitantana ny fizahan-tany dia miatrika ny filana hamolavola paikady marketing vaovao sy vaovao. Ireo paikady ireo dia mahatonga ny filan'ny mpanjifa ivon'ny varotra fizahan-tany. Ohatra, folo taona lasa izay dia vitsy ny mpivarotra fizahan-tany no nahita ny olan'ny fiarovana ny dia ho ampahany lehibe amin'ny tetikasan'izy ireo amin'ny marketing. Amin'izao tontolo izao ankehitriny, ny mpitsidika dia manahy ny amin'ny maha-azo antoka azy ireo ary mety hiantoka ny filaminana amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo hisafidy na handà toerana manokana. Ny fiovana eo amin'ny fiaraha-monina ao amin'ny fianakaviana, ny fampiasana fotoana malalaka, ary ny tsiro amin'ny dia vaovao dia midika fa tsy maintsy apetraka tsy tapaka ny fanontaniana marketing hafa raha toa ka faritra vaovao ahazoana tombony no tadiavina.
Ny fironana amin'ny dia ankehitriny dia hibaiko fa ny serivisy mifantoka amin'ny mpanjifa sy mifantoka amin'ny mpanjifa dia mandeha lavitra amin'ny famaritana ireo ezaka mahomby amin'ny marketing. Ireo fiovana ireo dia miteraka fiovan'ny toe-tsain'ilay matihanina mpizahatany. Anisan'izany ireto fanovana ireto: ny laharam-pahamehan'ny mpanjifa noho ny vokatra, ny fitantanana mandany fotoana bebe kokoa amin'ny vahiny, ary ny filàna mihetsika amin'ny famakafakana be dia be mankany amin'ny fitambaran'ny kalitao sy ny habeny. Ireto misy hevitra sy hevitra marketing momba ny fizahantany maromaro.
-Aza miady amin'ny fifaninanana omaly. Ny dia sy fizahan-tany dia niova fiovana lehibe tao anatin'ny folo taona lasa, nefa matetika ireo matihanina amin'ny fizahantany dia mbola miady amin'ny ady taloha. Ohatra, ny fifaninanana nataonao folo taona lasa izay dia mety ho vondrom-piarahamonina iray izay mifanalavitra lavitra anao. Noho ny vidin'ny zotram-piaramanidina sy ny fifaninanana ary ny fiakaran'ny trangam-pitaterana toy ny fitsangantsanganana an-tsambo mikendry fizarana tsena manokana dia mety tsy ny tanàna manaraka ny fifaninanana eo amin'ny fiarahamonina fa ny toerana rehetra manerantany. Fahendrena ny mieritreritra ny fomba mety hahatongavan'ireo mpifaninana taloha ho mpiray dina amin'ny ho avy.
- Fantaro raha mitovy amin'ny an'ny omaly ny mpanjifa. Nandalo fiovana lehibe teo amin'ny fiaraha-monina i tontolo tao anatin'ny folo taona lasa. Ohatra, ny trano fandraisam-bahiny ankehitriny dia tsy maintsy miatrika ny zava-misy fa ny mpandraharaha irery ray aman-dreny matetika dia mila mandeha miaraka amin'ny zanany kely, na ny fisian'ny fitomboan'ny isan'ny ray tokan-tena izay manome fikarakarana voalohany. Amin'izay dia ny "zaza" dia "mpanjifa" mitovy amin'ny an'ny ray aman-dreny. Toy izany koa, ny fotoana mazàna izao dia sarobidy kokoa noho ny vola. Ny fiovana avy amin'ny "famotsiam-bola" ho "fanimbana fotoana" dia midika fa amin'ny toerana manintona voalohany ny fizahan-tany dia mety tsy handany vola bebe kokoa intsony ny mpanjifa mba hialana amin'ny làlan-dàlana lava na mpamokatra adin-tsaina hafa, toy ny fotoana tsy ampoizina any amin'ny seranam-piaramanidina.
-Anotio ny mpanjifanao amin'ny fizarana azy ireo ho vondrona maro araka izay azo atao. Ny marketing amin'ny Niche dia efa resaka momba ny fizahan-tany foana, fa ny fizahan-tany dia mbola tsy nahalala 'niche ”betsaka tahaka ny ankehitriny. Fakafakao ny tobin'ny mpanjifanao avy amin'ny sokajy nentim-paharazana-statistikan'ny: taona, miralenta ary fidiram-bola, fa koa amin'ny fijerena modely amin'ny fitondran-tena, endrika fitsangatsanganana, lamina fandaniam-bola, fotoana betsaka azo zahana amin'ny vakansy, ary psycho- mombamomba ny demografika. Avy eo manandrama mamaritra izay azonao atolotra, ary iza ny mpanjifa no handoa ny laharam-pahamehana. Ohatra, faritra maro amin'ny indostrian'ny fizahantany no manadino fa ny olana amin'ny fiarovana dia manakiana. Ny fanapaha-kevitra momba ny vola sy ny kalitaon'ny fiarovana omen'ny trano fandraisam-bahiny na fisarihana iray dia tokony hoheverina ho ampahany lehibe amin'ny drafitra marketing.
-Aza manadihady fa tsy ny vondrona ihany no mety mividy ny vokatrao, fa koa iza amin'ireo vondrona mety tsy liana amin'ny zavatra amidinao. Amin'ny fahazoana sy fizarazarana ireo "tsy mpanjifa" dia azonao atao ny mamaritra izay tsena misy ny orinasanao manana vintana tsara indrindra hanitarana, ary iza ny tsena tokony hohadinoina mandritra izao fotoana izao. Manontania tena hoe inona avy ireo laharam-pahamehana amin'ny dia tsy an'ny mpanjifa. Diniho ao amin'ny lisitrao ireo toetra toy ny:
√ olan'ny fiarovana
√ sandany sy vidiny
√ kalitaon'ny serivisy
√ fotoana ilaina hanaterana ny serivisinao
√ habetsahan'ny fahasahiranana tafiditra amin'ny fitsidihana
√ haavon'ny fihenjanana
√ haavo avo lenta ny vokatrao
√ fotoana fiantsenana
Avy eo fantaro hoe ahoana ny laharam-pahamehan'ny mpanjifa tsy mpanjifa. Inona no tsy itovizan'ny tolotrao sy ny zavatra tadiavin'ireo tsy mpanjifa ireo? Azonao atao ve ny manamboatra fanovana mahomby izay ahafahana miditra ao amin'ireo vondrona vaovao ireo nefa tsy mamoy ny mpanjifanao ankehitriny?
-Miezaha mamaritra ary avy eo manome ny laharana izay tadiavin'ny mpanjifanao. Ohatra, ny mpanjifanao ve mitady ny vidiny mihoatra ny kalitaon'ny-vokatra na ny kalitao mihoatra ny vidiny? Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fotoana sy ny hafainganan'ny fandefasana-amin'ny-fanompoana? Ny laharam-pahamehan'ny olona dia samy hafa be amin'ny voly fialamboly, foibe fanatanjahan-tena ary spa. Fantaro izay azonao atao mba ho lasa safidy voalohany amin'ilay fizarana tadiavinao hisarika anao. Manontania tena hoe inona no ataon'ny mpifaninana aminao tsara kokoa noho ianao, avy eo fantaro raha mahomby amin'ny fifaninanana amin'io sokajy io.
-Fidio izay singa ao amin'ny orinasanao ahafahanao mahazo tombony lehibe indrindra. Ohatra, amidy matetika ny sakafo any amin'ny toerana manintona, seranam-piaramanidina ary milina fivarotana hotely amin'ny vidiny lafo kokoa noho ny amidy amin'ny fivarotana lehibe ao an-tanàna. Fakafakao ireo faritra faharoa amin'ny indostriao ireo mba hahitana hoe aiza no ahazoana tombony fanampiny. Ohatra, ny mpandeha antitra matetika dia manome lanja ny serivisy raha ny mpandeha tanora kosa matetika no mitady vidin-karena mihoatra ny serivisy tsara.
-Aza hadino mihitsy fa rehefa mandeha mitady fahafinaretana isika dia mitady fahatsiarovana fa tsy nofy ratsy. Matetika ny orinasa mifandraika amin'ny fizahan-tany dia miteraka fihenjanana fa tsy manamaivana azy. Ohatra, taraiky ny fahatongavan'ny vahiny ary mbola tsy vonona ny efitranony. Ny drafitra marketing tsara rehetra dia tokony hisy fanombanana amin'ny ankapobeny ny serivisy ho an'ny mpanjifanao. Fantaro ny fahalemen'ny serivisy ho an'ny mpanjifanao (tsy fahalalam-pomba, fampahalalana tsy dia tsara, tsy fahampian'ny hetsika ratsy amin'ny toetr'andro) ary amboary izany alohan'ny handehananao amin'ny dingana manaraka amin'ny famolavolana drafitra marketing.
-Mitadia tsena vaovao. Tapitra ny andro fivarotana ho an'ny olom-pirenena amin'ny firenena iray ihany. Ataovy mifanaraka amin'ny tontolon'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena ny orinasanao fizahantany. Mamolavola serivisy amin'ny fiteny maro, bokikely fampahalalana ary dokam-barotra. Apetraho amin'izay ilain'ny mpitsangatsangana iraisam-pirenena ny ora fiasanao. Aza adika ara-bakiteny ary aza sorohana rindrambaiko fandikan-teny. Matetika ny faux pas lehibe dia vita amin'ny fandikana ara-bakiteny.